‘चीनको बिजुली नेपालबाट म्यानमार पुर्‍याउन सकिन्छ’ | Daily State News
२० असार २०७५, बुधबार १२:०३ मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
१८ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै चीन भ्रमण दलमा सहभागी थिए । नेपालमा लोडसेडिङ हटाएर ख्याती कमाएका घिसिङ सफल व्यवस्थापकमात्रै होइनन्, प्राविधिक पक्षका जानकार इञ्जिनियरसमेत हुन् ।
हामीले घिसिङसँग प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएका विद्युत विकास सम्बन्धी सहमति र सम्झौताका बारेमा जान्न खोज्यौं । सबैभन्दा ठूलो जनचासो रहेको प्रश्न हामीले घिसिङलाई सोध्यौं- केरुङ र रसुवागढी हुँदै नेपाल-चीनबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव छ ? यदि सम्भव भए त्यो प्रशारण लाइनबाट नेपाललाई के फाइदा पुग्ला ?
कुराकानीका क्रममा घिसिङले अब भारत र नेपालमा जस्तै चीन र नेपालका बीचमा पनि ज्वाइन्ट कमिटीहरु बन्ने बताए । यसका लागि आफूले आइतबार ५ सदस्यको सिफारिससहित चिनियाँ पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको घिसिङले जानकारी दिए ।
अब रसुवा-केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेको खण्डमा नेपाल र चीनको वीचमा मात्रै नभई चीनले आफ्नो विजुली भारत र बंगलादेशलाई समेत बेच्ने बाटो खुल्ने घिसिङको तर्क छ । प्रस्तुत छ अनलाइनखबरले कुलमानसँग गरेको कुराकानीको अंश
साथै, अहिले हामीले भारतबाट मात्रै विद्युत आयात गर्न सक्छौं । चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नभएका कारण हामीले भारतमै मात्रै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रसारण लाइन निर्माण हुनेवित्तिकै यस्तो बाध्यता टरेर जान्छ । भारतबाट भन्दा चीनबाट बिजुली सस्तो पर्‍यो भने हामीले तिब्बतबाट विद्युत आयात गर्न सक्छौं ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जे भयो, सबै राम्रो भयो । अहिले जे-जस्ता सम्झौता भए, ती सबै उल्लेखनीय छन् र रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण छन् । आयोजनाहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणमा सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने छैन । चीनले सबै आयोजना अनुदानमा बनाइदिने त होइन । बीआरआईमा बनाएपछि त्यो ऋण नै हो ।
अहिले भारतसँग बनेको कमिटीमा जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुका समस्याबारे छलफल हुन्छ । तर, चीनसँग यस्तो संयन्त्र नभएका कारण प्रवर्द्धकहरुले व्यक्तिगतरुपमा आफ्ना समस्या सरकारी अधिकारीहरुसँग अनौपचारिक रुपमा राख्ने गरेका छन् । तर, अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता भएपछि अब संयन्त्र बन्ने निश्चित भएको छ, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।- साभार:अनलाइन खबर बाट